Faa'iidada - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
Iyadoo ah shirkad qalab soo saare oo muddo dheer soo saareysa, shirkadeena waxaa lagu caddeeyay dhowr shahaadooyin warshadeed sida kuwa soo socda ee muhiimka ah:
Warshadaha qalabka bamgareynta, shirkadeena waxay uga soo baxday dhiggeeda sababahan soo socda:
1. Qiimaha Waxsoosaarka Hoose iyo Qiime macquul ah
Waxay ku yaalliin xudunta u ah warshadaha wax soo saarka bamka Shiinaha, magaalada Shijiazhuang, shirkaddayadu waxay aasaastay warshad slurry xirfad leh. Maaddaama maadada loogu talagalay bamgareynta, birta ay ku raaxeysato qiimo hoose halkan, qiimaha wax soo saarkeennu aad ayuu hoos ugu dhacay. Taasi waa sababta aan ugu bixin karnay bambooyin la isku halleyn karo qiimo macquul ah. Intaa waxaa sii dheer, saldhigeena soo saarida bamka ee batroolka kiimikada wuxuu ku yaalaa Dalian waxaana jira shaqaale khibrad iyo khibrad badan leh.
2. Wax soosaar la isku halleyn karo oo Tayo leh
Maaddaama aan nahay soo saaraha qalabka bamgareynta, waxaan had iyo jeer ku dhegan nahay mabda'a tiknoolajiyada iyo tayada ayaa ugu horreysa. Dhamaan bambooyinku waa kuwo loo qaabeeyey laguna soo saaray farsamooyin iyo qalab casri ah oo heer caalami ah. Isla mar ahaantaana, waxaan bixinnaa alaabooyin la hagaajiyay oo loogu talagalay iyada oo loo eegayo shuruudaha isbeddelaya ee macaamiisheenna. Waxaan kuu balanqaadeynaa in bamboo kasta oo aan ku siino adiga uu ku raaxeysto tayo wanaagsan iyo waxqabad la isku halleyn karo.
Si loo hubiyo in cutubyadeenna bamgareynta ee lagaa siiyay ay si dhammaystiran u qancinayaan shuruudahaaga, waxaan dejinnay nidaam nidaamsan oo tayo leh oo lagu ilaaliyo tayada. Waxaan bixin karnaa badeecooyin lagu caddeeyay calaamadda CE, heerarka ISO9001 ama heerarka kale ee warshadaha. Dhanka kale, waxaan kuusoo bandhigi karnaa diiwaanka xakamaynta tayada iyo warbixin laxiriirta adiga hadii loo baahdo, sida "warbixinta hantida maadiga ah iyo kiimikada ee agabyada loogu talagalay mashiinada qaybaha ugu muhiimsan", "warbixinta isku dheelitirka rotor", "warbixinta baaritaanka hydrostatic" iyo "warbixinta kormeerka gudbinta kahor" . Isku soo wada duuboo, waxaan u qaadaneynaa xiriiriye kasta oo ka mid ah kontoroolka tayada mid culus, waxaan hubineynaa in qeyb kasta oo bamgareyn ah ay ku raaxeysaneyso tayo wanaagsan iyo waxqabad lagu kalsoonaan karo.